တပ်မတော်ရဲ့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာနဲ့ အစွဲအလန်း ကြီးမားမှု ဖြစ်စဉ်များ – အပိုင်း (၂) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
တပ်မတော်ရဲ့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာနဲ့ အစွဲအလန်း ကြီးမားမှု ဖြစ်စဉ်များ – အပိုင်း (၂)
ယခုဆောင်းပါးအား www.photayokeking.org မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။
မူရင်းဆောင်းပါး www.photayokeking.org/policylaw/armyreform/1084-old-thinking-from-burma-army-02 တွင် သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ယခု ဆောင်းပါးကို www.facebook.com/pofpage မှ တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ကိုယ့်အချင်းချင်းမှားပြီး ပစ်ခတ်တယ်ဆိုရင်တောင် ရန်သူနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာထက် ပိုပြီးထိရောက်ပြီး ဒဲ့မှန်သွားတတ်ပါတယ်။ ရှေ့တန်းချီတက်နေစဉ် စစ်ကြောင်းနဲ့ ဂျီ၊ ဆတ်တို့က ရင်ဆိုင်တွေ့ပါက အဲဒီစစ်ကြောင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး အကျအဆုံးများဖို့သာရှိကြောင်း ကြုံတွေ့သိရှိပါတယ်။ စစ်ကြောင်း အိပ်နေ စဉ် ဂျီလာဟောက်ပါက အဲဒီစစ်ကြောင်း ရန်သူရဲ့ ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။ မြွေတွေ့ရင်တော့ အဲဒီစစ်ကြောင်းခရီးရှည်ဖို့သာရှိကြောင်း လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်များအရ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ အပူ (၁၁) မီးငြိမ်းစေဖို့ (၁၁) ရက် (၁၁) လ (၂၀၀၅) ကို ထွက်ပြီလို့ ဝန်းကြီးတွေအား အော်ခိုင်းပြီး ရန်ကုန်ကရုံးတွေ နေပြည်တော်ကို အတင်းရွှေ့ခိုင်း၊ နေပြည်တော်ကို ရှေးခေတ်နန်းတော်အဆောက်အဦးတွေလို ဆောက်ခိုင်းကာ သူကိုယ်တိုင် သာလွန်မင်း တရားကြီး ၀င် စားလို့ဆိုပြီး ဘုရင်ရူးရူးနေတာတွေရယ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားက ဘုရားဌာပနာတွေ ကို ရွှေ့ဖို့လုပ်ခိုင်း တာတွေရယ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားက ကျောက်စိမ်း ဘုရားကို နိုင်ငံတကာအကြီးအကဲတွေ လာရောက်တိုင်း ဦးခိုက်ခိုင်းတာတွေ၊ ဘုရားရင်ပြင်တော်မှာ လုံခြုံရေး အတွက် ဆိုပြီး သေနတ်တကား ကား နဲ့ဦးသန်းရွှေ အနားမှာ တွေ့မြင်ရတာတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နာမ်နှိမ်ဖို့ ကတ်ကင်းဖြစ်တဲ့ ကြက်ဆူပင်စိုက်ခိုင်းတာတွေ၊ အိမ်တော်ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဖျာခင်းပြီးအောက်မှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဆိုဖာပေါ်ရှိသူ့ကို ဖူးတွေ့ခိုင်းတာတွေဟာ အစွဲအလန်းကြီးမားမှုနဲ့ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့ အောက်လမ်းနည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးစက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ လုံခြုံရေးယာဉ်များပေါ်မှာ တာဝန်ရှိသူများမှအပ မတက်ရဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို ဖီဆန်ပြီး အရာရှိကတော်များ ဟာ ကားကြုံလိုက်ပြီးဈေးဝယ်တာမျိုးရှိကာ အဲဒီကားကို စစ်သည်တွေက အလေးပြုလိုက်တိုင်း မိန်းမတွေကို အလေးပြုလိုက်ရတာမို့ ဘ၀င် မကျစရာဖြစ်စဉ်တွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ရန်သူမှ တပ်သတင်းများကို အလွယ်တကူ ကြားဖြတ်ဖမ်းယူစရာမလိုပဲ ဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ မိန်းမများ ထံမှ ရယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်များ ရှိပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေရဲ့တပည့် အပေါင်းအပါတစ်ချို့လည်း လိုက်ဖက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိပါတယ်။ အရာရှိကြီးဗိုလ်ချုပ် ကတော်အတော်များများက ပန်းသီးကို လက်အောက်ခံတပ်တွေက ဧည့်ခံကျွေးမွေးရင် ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ မစားချင်တာတွေ၊ စပျစ်သီးကျွေးရင် စာပစ်ခံရမှာစိုးလို့ မကျွေးခိုင်းတာတွေ၊ ဩဇာရှိအောင် ဩဇာသီးဘုရားကပ်ခိုင်းတာတွေ၊ ဖယိုဖရဲဖြစ်မှာစိုးလို့ ဖရဲသီးကို မစားခိုင်းတာတွေ၊ ကံကောင်းစေဖို့ ကံကော်ရန် ကျွဲကောသီး ဘုရားကပ်ခိုင်းတာတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေထောအောင် ထောပတ်သီးဘုရားကပ်ခိုင်းတာတွေ၊ ကုန်သည်တွေ စီးပွားရေးသမားတွေ လာဖက်အောင် လက်ဖက်ကိုလက်ဆောင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ကို ဧည့်ခံလို့ ကျွေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်ကို ထည့်ခိုင်းတာတွေ၊ မင်းစိုးရာဇာတွေ မိမိအပေါ် အမြင်ကြည် လင်အောင် good အောင် မင်းဂွတ်သီးဘုရား ကပ်ခိုင်းတာတွေ၊ ဦးသန်းရွှေ အမြင်ကြည်အောင် ရွှေကြည်ဆနွင်းမကင်း ဘုရားကပ်ခိုင်းတာတွေ စသဖြင့် အင်မတန်မှ အစွဲအလန်းကြီး ဇီဇာကြောင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြည်အောင်ဆိုရင် တပ်မ (၈၈) တပ်မမှူးဘ၀တုန်းက စစ်သည်တွေ ရှေ့တန်းထွက်ရင် ရှေးခေတ်ဘုရင်တွေ စစ်ချီစစ်တက်သလို ဓားကိုင်ရ မယ်ဆိုလို့ စစ်သည်တိုင်း ဓားတွေဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူက တပ်တွေကို ၀င်စစ်ရင် ကြမ်းတမ်းတာမို့ တပ်တစ်တပ်ရဲ့ တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးက သူ့ရဲ့အကြိုက် မျှစ်တာလပေါဟင်းချက်ကျွေးလိုက်တာနဲ့ တပ်တောင် မစစ်တော့ပဲ စက်တော်ခေါ်အိပ်ပျော်တဲ့ဖြစ်စဉ် ကြားဖူးပါတယ်။
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း) တစ်ဦးဆိုရင် သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ လက်သည်တရားခံဖော်ဖို့ အကြားအမြင် ထိရောက်စွာဟောတတ်တဲ့ ဆွံ့အနေတဲ့ အီးတီအား အရာရှိတစ်ဦးကို ဖိအားပေးစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အီးတီက နိုင်ငံရေးကိစ္စမဟောဘူးဆိုလို့ အဲဒီ့အရာရှိစိတ်ညစ်ခဲ့ရကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးဆိုရင် တပ်ရင်း အ၀င်ဂိတ်မှာ ၀င်ဝင်ခြင်း တပ်ရင်းမှူးက ဗဟိုကင်းစစ်ရေးပြ၀င်စစ်ခိုင်းလို့ ဒေါသူပုန်ထ ဖူးပါတယ်။ ဧည့်ရိပ်သာက ကြိုဆိုရင် လန်းဆန်းတာဝါကို Ready Made ဖောက်တာပဲ ကြိုက်ပြီး လျှော်ဖွတ်ပြီးမှပဲ သုတ်ရတဲ့ပုဝါကို မကြိုက်ဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။ လူကြီးတိုင်း စစ်တပ်မှာ ရောဂါအသည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Golf ကိစ္စမှာလည်း တပ်တွေခေါင်းခဲရပြီး အဲဒီ Golf ပွဲမှာ အရှုံးနဲ့ ကြုံတွေ့ရရင် အဲဒီတပ်က ကောင်းကောင်းခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအစဉ်အလာဆိုးတွေ အစွဲအလမ်းကြီးမားမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်မှု၊ အတ္တ လောဘကြီး မားမှုတွေဟာ တပ်မတော်ကို ဂုဏ်သိက္ခာကို မှေးမှိန်စေပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပြန်လည်တိုးတက်လာစေဖို့ တပ်မတော် သားတိုင်းမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြသလို ယနေ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းကာလတွင် လက်ရှိအစိုးရအား တတ်အားသရွေ့ ကူညီပံ့ပိုးပြီး Professional Army ဖြစ်ရေး ရည်မှန်းချက်ထား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား www.photayokeking.org မှတဆင့် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
This entry was posted on January 15, 2013, in ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← The plight of the Rohingyas isachallenge for Aung San Suu Kyi
မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို တရုတ်နည်းပညာဖြင့် ကမ္ဘာသိအောင် ပြသပေးလိုဟုဆို →